Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: hasin’ny velirano | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: hasin’ny velirano
Misy angamba nanadino ny hasin’ny fanaovana velirano ka tsy manome lanja firy amin’ny velirano henony ary ao koa no mety lasan’ny fakampanahy hanao an’izany velirano izany ka hitsabatsabaka amina ranomasina tsy mahafantatra na ny mety alaliny na ny mety ho herin’ny onjany.
Maro ny olona eto anivon’ny fiarahamonina no leon’ny fitapitaka nohon’ny fanantenantenam-paona avy amin’ny fampanantenana paokaty, kiriko dia nitodi-damosina amin’ny raharaha pôlitika. Ny raharaha pôlitika anefa mitohy hatrany ary tsy misy afa-miala na manaiky na tia anda na manatrika na mihevitra hiamboho azy samy voakasony avokoa noho izy izany hoe pôlitika no mametraka ny fifehezana eto amin’ny tontolo iarahana iaina.
Rariny ihany raha mitady ho leo politika ny maro nohon’ny toetran’ny mpanao pôlitika maro, ataony toy ny kilalao ilay adidy lehibe antoky ny fiainam-bahoaka, fitapitaka no betsaka, miharihary izany rehefa tonga ny fifidianana, fampandrina adrisa fapanantenana ny lanitra tsy ho takatra, heno avokoa izay mety anaovana varo-dainga. Raha ny vahoaka no voalaza ho tompo-pahefana izay apetrany amin’ny olona fidiny ny fampiasana ny fahefana matetika tsy any amin’izay nampanantenainy ireo nolanin’ny vahoaka no itondrany ny raharaha. Arak’izany tompom-pahefana mora fitahana ny vahoaka, tsy izay anefa no rariny fa mila fifehezana ny fanatanterahana an’izay nifanekena. Fantatra moa fa araky ny voalazan’ny fahendren’ny Ntaolo «ny toky fitaka», raha tsy misy fifamatorana entitra ahafahana manameloka sy manome sazy an’ireo namitaka dia hitohy hatrany ny fifaninanan’ny mpilatsaka amin’ny fahaizana mivarotra saka be loha. Tsy hisy ny fiovana, ary lakalaka ny fanankinana amin’ny fiheverana fa «tsy misy ny tody fa ny atao no miverina». Ny tazana moa dia ireo nahazo aina sy nahangona harena, nefa angamba raha tsaraina ny adidy tsy noefaina sy ireo natao vita ratsy no betsaka «voky izy dia natory, ny vita boribory, fananambe no nijoro». Tezitra ny olona ka raha tsy tia anompa dia nametraka anarambositra toy ny hoe Ra…mampiesona, izay diso ihany angamba fa ilay iny anie dia niherotra nitsangana nampiheson’ny vadiny sy ny tandapany. Avela eo iny resaka mampalahelo sy mahasosotra iny, fa andeha ny sedran’ity fampanantenana fonoka mampatorim-bahoaka no iverenana. Raha hita ny ratsy amin’ny finonoampaona nohon’ny fahaizan’olona mandrebireby amin’ny filazana hoe «minoa fotsiny ihany», tsy misy antoka ahafahana hitaky tamberin’ny raha nifanekena afa-tsy ny fanomezana hasina ny toky nifanomezana. Tsy noforonina izany fa efa hatramin’izay teo amin’ny fomba rehefa anome hasina ny fifanekena. Samy mahalala ny lanjan’ny raha manana ny hasiny izany, tsy fisangy adidin’izay sahy mametaveta mamoafady. Ireo manao velirano dia manome zo sy rariny amin’ny fahafahan’ny mponina hitaky ny vokatr’ilay asa nanaovana velirano ny fanatanterahana azy.